Ukudla okunesifo sikashukela nge-hypertension > Ukudla ngesifo sikashukela
Ukondleka Okubalulekile Kwe-Hypertension for Diabetes
Ngokwezibalo, ukufa kwesifo sikashukela kungokwesithathu ngobukhulu emhlabeni. Ukondliwa okufanele kwesifo sikashukela sohlobo 2 nge-Hypertension kungadambisa kalula lesi sifo futhi kuthuthukise impilo. Kaningi kunalokho, imbangela yesifo sikashukela ilele ekudleni okungondlekile, ukukhulupha ngokweqile, ukusetshenziswa kabi kotshwala nokubhema. Kodwa-ke, abantu abanesifo sikashukela sohlobo loku-1 bangakhalaza ngengcindezi eyandayo. Ukwelapha ngempumelelo i-hypertension, kubalulekile ukunquma ngokunembile imbangela yokuvela kwayo.
Izimbangela zomfutho wegazi ophezulu kushukela
Ku-diabetes, ingcindezi ka-130/85 ibhekwa njengephakeme.
Umfutho wegazi ophezulu kushukela unezimbangela ezilandelayo:
Isifo sezinso noma i-nephropathy yesifo sikashukela esidalwa yisifo sikashukela sesifo sikashukela sivame ukubizwa ngokuthi isifo sikashukela sezinso.
Ukwanda kwengcindezi ye-systolic (i-systolic hypertension eyingqayizivele) kuvame ukubonwa kubantu asebekhulile ngenxa yokuwohloka kwemithambo okuhlobene nobudala, ukuphazamiseka kanye ne-atherosclerosis.
I-hypertension ebaluleke kakhulu (eyinhloko), izimbangela zazo engaqondakali ngokuphelele.
Ukuphazamiseka kwesistimu ye-endocrine: izifo ze-gland yegland, amanyikwe, izindlala ze-adrenal, ama-hormone ocansi abesifazane.
Ukubaluleka Kokudla Kwesifo Sikashukela kanye Ne-Hypertension
Lapho inani elikhulu lamanzi ligcinwa emzimbeni ngenxa yamazinga kashukela akhuphukile noma umsebenzi wezinso ongasebenzi kahle, umthamo wegazi elijikelezayo uyanda, futhi lokhu kuholela ekwandeni komfutho wegazi. Ngakho-ke, ngokulawula izinga lamanzi e-hypertension, ungasusa ama-pressure surges futhi uvikele ukuthuthukiswa kokuhluleka kwe-renal. Lapho inkinga yezinso isivele idlulele esigabeni esingamahlalakhona, baphendukela kuma-diuretics, ACE inhibitors and blockers. Kodwa-ke, ukuthatha izidakamizwa kuzosebenza kuphela uma umuntu elandela ukudla. Kuwukunganakwa kokudla okufanele okucasulayo kokubili umfutho wegazi ophakeme nesifo sikashukela. Isikhathi eside, unamathela ezimisweni zokudla okufanele, ungasusa isidingo semithi.
Umsoco kufanele uqinisekise ukuthathwa kwawo wonke amavithamini kanye namaminerali adingekayo emzimbeni, kufake isandla ku-normalization ye-metabolism. Lapho ubhala imenyu, into esemqoka ukunamathela esele esele lamafutha kanye nama-carbohydrate, cabanga ngenani lamandla wezitsha ngokuhambisana nezidingo zomzimba, ukuvikela ukukhuluphala. Ama-carbohydrate “asheshayo”, akhuphula ushukela wegazi kakhulu, aphethwe ngokuphelele. Uma kungenzeka, buyisela amafutha ezilwane esikhundleni samafutha emifino, yenza ukudla okudla kanye namanani ashelele we-carbohydrate “ahamba kancane” asisekelo sokudla. Yidla okungenani amahlandla ama-4 ngosuku, kepha kungcono ukuhlukanisa ukudla ube ama-5-6 receptions.
Lapho uhlanganisa ukudla, sebenzisa amatafula we-b / f / y / kcal ekudleni.
Izici zokudla okunempilo ngenkambo efanayo ye-2 pathologies
Ukuze ungavuseleli ukugcinwa kwamanzi emzimbeni, nciphisa ukudla okunosawoti, okusemathinini, okubhemayo okubangela ukoma. Nqaba utshwala kuze kube phakade, imiphumela yayo elimazayo inabela kuzo zonke izitho nezinqubo zomzimba, unqamule imiphumela yokudla nemithi. Ukuhlukumeza utshwala ngokweqile kwesizinda somfutho wegazi ophakeme nesifo sikashukela kugcwele ukufa. Ukubulawa yindlala kwalezi zifo kuyaphikiswa. Kungadala i-gastritis, izinkinga zamathambo nge-atherosclerosis, ukwehla okubukhali koshukela wegazi, i-hypoglycemia. Futhi ukuzinzisa umuntu ophethwe yisifo sikashukela ngemuva kokubulawa yindlala akulula.
Amamenyu wesifo sikashukela kanye ne-Hypertension
Ukudla kwesifo sikashukela kanye nomfutho wegazi ophakeme kufanele kufakwe:
umhluzi wemifino noma oyinyama
inyama yenkukhu ebilisiwe noma ebhakwe (turkey, inkukhu) nenhlanzi (hake, notothenia, pollock),
imikhiqizo yesinkwa sikakolweni ephelele,
okusanhlamvu - ama-buckwheat, oatmeal, amabele,
izithelo namajikijolo noshukela omncane,
imifino ephansi yesitashi.
Izibonelo zemenyu yansuku zonke yesifo sikashukela esine-hypertension:
Ngabe kusabonakala kungenakwenzeka ukwelapha isifo sikashukela?
Ukwahlulela ukuthi ufunda le migqa manje, ukunqoba empini yokulwa noshukela wegazi ophezulu akukona ngasohlangothini lwakho okwamanje.
Futhi usuvele wacabanga ngokwelashwa esibhedlela? Kuyaqondakala, ngoba isifo sikashukela yisifo esiyingozi kakhulu, okuthi, uma singalashwa, singaphumela ekufeni. Ukoma okungaguquki, ukuchama ngokushesha, umbono onsundu. Zonke lezi zimpawu uyazijwayela.
Kepha kungenzeka ukwelapha imbangela kunomphumela? Sincoma ukufunda i-athikili ngezindlela zokwelapha ushukela ezikhona njengamanje. Funda i-athikili >>
Izimbangela zomfutho wegazi ophezulu kwabashukela
Njengoba umfutho wegazi ophakeme kuphela wenza inkathi yesifo sikashukela, kungakhathalekile ukuthi hlobo luni, ukunakekelwa kufanele kuthathwe ukunciphisa umthelela omubi walesi sifo esivamile.
Njengomthetho, umthombo wehypertension ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1 ibizwa ngokuthi yi-diabetesic nephropathy.
Kukulesi simo esiyimbangela enkulu yomfutho wegazi ophezulu kumaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili awo wonke amacala. Lapho kukhona ukuphazamiseka kwe-carbohydrate metabolism yohlobo lwesibili emaphesenti angamashumi ayisikhombisa emacala, imbangela yilokho okubizwa ngokuthi yi-hypertension ebalulekile. Kepha ngamaphesenti angamashumi amathathu azo zonke izimo ze-hypertension kuyaqapheleka ngenxa yobukhona besifo sezinso.
Ngokwezibalo ezishaqisayo, cishe amaphesenti ayisishiyagalombili eziguli ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-2 athola lesi sifo ngenxa yomfutho wegazi ophakeme. Inhlanganisela esondelene yalezi zifo ezimbili ngokungangabazeki ihlotshaniswa nokwanda okukhulu kwamaphesenti okukhubazeka ngaphambi kwesikhathi nokufa kweziguli. Njengomthetho, umphumela obulalayo uvela ngenxa yokuvela kwama-pathologies ezinhliziyo.
Enye inkambiso yokuqhamuka kwe-hypertension ingaba yi-hyperlipidemia. Okwamanje, kuyaziwa ukuthi ukwephulwa okukhulu kwama-metabolism wamafutha kungalandelwa kuzo zombili izinhlobo zesifo sikashukela.
Kaningi, ochwepheshe babhekene nezinhlobo ezilandelayo zokwephulwa:
ukunqwabelana kwe-cholesterol ye-atherogenic egazini lomuntu,
Ngokusho kocwaningo lwesikhathi eside labachwepheshe, kwaziwa ukuthi i-dyslipidemia ithinta kabi izitho zohlelo lomuntu lokukhuculula. Umphumela wale miphumela emibi wukuvela kokungasebenzi kahle kwe-endothelial.
Indima ebalulekile ekuqubukeni kwezinkinga nezinso, ikakhulukazi, ukwehluleka kwezinso, kanye nokuba khona komfutho wegazi ophazamisekile ekuphazamisekeni kwe-carbohydrate metabolism, kudlalwa ngento efana ne-angiotensin II.
Ukuqina kwayo ezinso kudlula ngokweqile izinga egazini. Njengoba wazi, le nto ine-vasoconstrictor eqinile, imvamisa, imiphumela ye-prooxidant ne-prothrombogenic.
Izinkinga ezimbi kakhulu ze-carbohydrate metabolism kuhlobo 2 sikashukela kungenxa yomfutho wegazi ophakeme.
Ngaphezu kwalokho, isabelo sebhubesi salesi siguli sinamaphawundi angeziwe, ukuphazamiseka kwe-lipid metabolism, futhi emuva kwesikhashana, sibhekene nokwephulwa kokubekezelelwa kwe-carbohydrate. Lokhu kuboniswa yi-hyperglycemia ngokushesha ngemuva kokwethulwa komthamo othile kashukela.
Cishe isigamu seziguli, ukuphazamiseka kwe-metabolic kukhula kube uhlobo lwe-2 mellitus yesifo sikashukela. Isisekelo sokwakhiwa kwalezi ziphazamiso ukuntuleka kokuthola izicucu kwezicubu zomzimba kuyi-pancreas.
Imenyu Yokudla Okuphansi Kwe-Carb Ye-Diabetesic Hypertension
Lapho kukhona ukuthathwa kwe-glucose engalungisiwe, ekhona nge-hypertension, ochwepheshe batusa ukudla okukhethekile.
Ukudla okwenzelwe umfutho wegazi ophakeme nesifo sikashukela kubalwa ngokuqukethwe okuphansi kwama-carbohydrate, okubhekwa njengeyona ndlela efanelekile yokunciphisa futhi kugcinwe ezingeni elidingakalayo zonke izinkomba zokuhlaselwa kweglue egazini.
Ngaphezu kwalokho, ukudla okunjalo kuzonciphisa kakhulu isidingo somzimba se-insulin. Ukudla okunjalo kwesifo sikashukela sohlobo 2 nge-hypertension kungasebenza kuphela uma isifo sezinso esingalapheki singakakhuli.
Isixazululo esihle kakhulu ukusetshenziswa kwaso esigabeni se-microalbuminuria. Ungakhohlwa ukuthi ukwehlisa amazinga kashukela egazi kuthuthukisa kakhulu ukusebenza kwezinso. Kodwa-ke, ezigabeni ezibucayi kakhulu zesifo, kuyenqatshelwe ngokuphelele ukusebenzisa ukudla okunjalo ngaphandle kwemvume kadokotela ohambelayo.
Izidingo eziphambili zokudla kwesiguli:
njengoba ukukhuluphala kuyimbangela enkulu yesifo sikashukela, iziguli kudingeka zilondoloze ukulinganisela okuthile ekusebenzeni kokudla. Umgomo oyisisekelo wale ndima ungokulandelayo - umuntu kufanele asebenzise inani elinjalo lama-kilocalories awachitha isikhathi esithile. Leli nani akumele lidlule. Uma umuntu enomkhuba wokuthola isisindo, khona-ke okuqukethwe kwekhalori yokudla kwakhe kufanele kuncishiswe cishe ngekota,
umzimba wesiguli kumele wamukele wonke umsoco nezakhi ezidingekayo empilweni yakhe ejwayelekile. Kungale ndlela kuphela lapho ukuphuculwa kwazo zonke izinqubo ze-metabolic kungatholwa,
ama-carbohydrate agaywe kalula anqatshelwe ngokuphelele. Ngohlobo lwesibili sikashukela, lo mthetho uhambelana kakhulu,
isiguli akufanele singeqi ekudleni kwansuku zonke kokudla okugcwele ngama-lipids. Cishe ama-50 g wamafutha ngosuku. Ukunxephezela amafutha ezilwane, ungasebenzisa zonke izinhlobo zamafutha zemifino nemikhiqizo equkethe amafutha emifino. Uma nje zidliwa njalo, ukunqwabelana ngokweqile kwamafutha kumaseli wesibindi kungavinjelwa.
Qiniseka ukulandela ukudla.
Kubalulekile kakhulu ukuthi ungakhohlwa ukuthi ukudla kufanele kuthathwe okungenani kane ngosuku.
Lo mthetho wegolide awukhuthazwa ukwephulwa, ikakhulukazi uma isiguli sifaka i-insulin. Uma ihanjiswa kabili ngosuku, khona-ke udinga ukudla okungenani izikhathi eziyisithupha ngosuku engxenyeni encane.
Ngaphambi kokukhulisa ukondleka kwesifo sikashukela sohlobo 2 kanye nomfutho wegazi ophakeme, kubalulekile ukuthi ekugcineni unqume ukubekezelelwa kwe-glucose. Okokuqala udinga ukwenza lokho okubizwa ngokuthi yinguqulo yecala, lapho uzokwazi ukuthola ukuguquguquka okuqondile ekuqoqweni koshukela egazini.
Uma kungakapheli amasonto amabili izinga likashukela le-plasma libuyele kwelejwayelekile, khona-ke inani lama-carbohydrate asetshenzisiwe lingakhuphuka kancane kancane. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukwandisa ukugcwala kwama-lipids emzimbeni kungaholela ekuqhubekeni kwesifo sikashukela ngokushesha.
Izitsha ezinoshukela, kanye nokudla okunamafutha, kufanele zigadwe eduze. Zingadliwa kuphela ngamanani amancane. Ukudla okuqukethe ama-carbohydrate namafutha ngamanani amakhulu (ushokoledi, u-ayisikhilimu, amakhekhe, ama-dessert ahlukahlukene) kungadala ukulimala okukhulu.
Ngaphambi kokudala ngokuzimela imenyu yokudla, udinga ukubonana nochwepheshe ozokunikeza izeluleko ezisebenzayo kulolu daba.
Uma isiguli sitholwa kanyekanye i-mellitus yesifo sikashukela kanye nomfutho wegazi ophakeme, khona-ke odokotela bayeluleka ukuthi lehlise kakhulu izinga lokudla kosawoti lifinyelela kumagremu amahlanu ngosuku.
Uma uhlobo olunamandla lomfutho wegazi ophakeme lwatholakala, kuyodingeka uyilahle ngokuphelele. Iya ekudleni kwe-hyposalt kungenzeka kuphela ngemuva kwesikhathi esithile.
Elinye iphuzu elibalulekile ukuthi usawoti ufakwa kangcono hhayi ngesikhathi sokupheka, kepha phakathi nesikhathi sokudla. Ngakho-ke, inani likasawoti nsuku zonke elichithwa lizoncishiswa kakhulu.
Ngemuva kwenkathi ethile yesikhathi, izinketho zomuntu zokunambitha zishintsha kakhulu. Usawoti ungathathelwa indawo izinongo ezahlukahlukene nezithelo ezimuncu. Kuyaqapheleka futhi ukuthi akuvunyelwe ukusebenzisa ingxube kasawoti wasolwandle enezinongo. Ingasetshenziswa kuphela ukwengeza ekudleni okwenziwe ngomumo.Kepha ngokuqondene nohlu lwemikhiqizo enqatshelwe, lokhu kungafaka:
inyama ebhemayo namasoseji,
ukudla okuhlukahlukene okusemathinini
izitsha ezinosawoti kanye nososo,
ukudla okusheshayo okungathengwa ezitolo ezinkulu,
Kubalulekile kakhulu ukuthi ungakhohlwa ukuthatha i-calcium ne-magnesium ukuze ube nomfutho ophakeme kumfutho wegazi ophakeme. Kepha, umthamo walezi zinto kufanele ube olinganiselayo.
Uma usondela endabeni yokudla okunesifo sikashukela kanye nomfutho wegazi ophakeme, unganciphisa kakhulu ukugcwala kweglucose egazini.
Izisekelo Zokudla Kwesifo Sikashukela Sohlobo 2:
Ukudla kwesifo sikashukela kanye nomfutho wegazi ophakeme kungenziwa ngokuzimela, kepha udokotela ohambelayo angakwenza futhi lokhu. Uzokutshela ngokuningiliziwe ngawo wonke ama-nuances nemithetho yokudla, ukukutshela ukuthi yikuphi ukudla ongakudla nokuthi yikuphi okungakudli. Indlela enekhono kulo msebenzi izosivumela ukuthi sisungule imisebenzi ejwayelekile yempilo futhi sinciphise zonke izingozi ezikhona zempilo.
Futhi, umuntu akufanele akhohlwe ngokuvakasha njalo ehhovisi likadokotela ayohlolwa nokuhlolwa okuphoqelelwe. Isiguli ngasinye esinezinkinga zomfutho we-hypertension nge-carbohydrate metabolism kufanele sigadwe udokotela ohambelayo ukuze avikele impilo yakhe ngangokunokwenzeka.
Umsoco wohlobo 2 Isifo Sikashukela kanye Hypertension
Iminyaka eminingi, yokulwa ngempumelelo ne-hypertension?
Inhloko Yesikhungo: “Uyokumangaza ukuthi kulula kanjani ukwelapha umfutho wegazi ngokuthatha nsuku zonke.
Ukuze unciphise isisindo somfutho wegazi ophakeme futhi uthayiphe i-2 mellitus yesifo sikashukela, kuyadingeka ukuqonda i-pathogenesis ne-etiology yalezi zifo.
Esikhathini sikashukela, izinqubo ze-metabolic ziyehluleka, lapho ama-pancreas, obhekele ukucubungula i-glucose, engakhiqizi i-insulin.
Abafundi bethu basebenzise ngempumelelo iReCardio ekwelapheni umfutho wegazi ophakeme. Ukubona ukuthandwa kwalo mkhiqizo, sinqume ukukunikeza ukunakwa kwakho.
Ngakho-ke, ukunyuswa koshukela egazini kuyanda, okukhonjiswa yizimpawu ezahlukahlukene. Ezinye zalezi zimpawu ziyingozi enkulu, ezidinga ukungenelela kwezokwelapha okufika ngesikhathi.
Namuhla, isifo sikashukela sohlobo 2 sithinta abantu abayizigidi eziyi-150, abayizigidi eziyisishiyagalombili babo bangamaRussia. Ngaphezu kwalokho, muva nje lesi sifo, kanye nomfutho wegazi ophakeme, sesisemncane.
Ngeshwa, lezi zifo zihlala zithuthuka, ngakho-ke, ngokwesibikezeli sodokotela, inani leziguli ezinalolu hlobo lokuxilonga lizokhuphuka kabili ngeminyaka eyi-15.
Yiziphi izimpawu zesifo sikashukela sohlobo 2?
I-DM ikhula isikhathi eside, ngenxa yalezi zizathu ukubonakaliswa kwayo kuvame ukuqashelwa kuphela phakathi nendawo kanye nokudala. Izimpawu ezilandelayo ziyimpawu yalesi sifo:
ukoma, kanti umuntu uphuza amanzi angaphezu kwamalitha ama-3 ngosuku
ukuthikamezwa kokuzwa nokubuka,
ukozela, ukunganaki, i-malaise,
ukuchama njalo ebusuku,
inzuzo yesisindo esheshayo
ukuvuselelwa kwesikhumba okungalungile, ukulunywa.
Imvamisa, abanesifo sikashukela bakhuluphele futhi babe nomfutho wegazi ophakeme. Izinkomba ezinjalo zithinta kabi ukusebenza kwabo nenhlala-kahle.
Ngakho-ke, ukuze wenze isimo sibe ngokwejwayelekile, kubalulekile ukunciphisa isisindo somzimba.
Kungani uhlobo 2 sikashukela lukhulisa isisindo?
Imbangela ejwayelekile yokwanda kwesisindo somzimba umuzwa ongapheli wendlala, okunzima kakhulu ukucindezela.
Ngakho-ke, kunzima kakhulu ukuthi isiguli sinamathela ekudleni okukhethekile, ngenxa yokuthi masisha uthola isisindo.
Kulesi sisekelo, kunomuzwa wecala kanye nesimo sokuxinzelela, esikhulisa isimo kuphela. Ngaphezu kwalokho, ngesifo sikashukela mellitus sohlobo lwesibili, ukwehluleka kwenzeka ekungcolisweni kwezinto ezenziwa izinso, ngenxa yalokho uketshezi olwedlulele luqongelela emzimbeni. Ngakho-ke, ukugcwala nokuvuvukala kungabangane babo bonke abanesifo sikashukela.
Ngaphezu kwalokho, kunento efana ne-metabolic syndrome, ebizwa nangokuthi i-insulin resistance syndrome. Ngenkathi yokuqhubeka kwayo, ngaphezu kokulimaza i-glucose metabolism, kuyehluleka okunye ukwehluleka kwe-metabolic. Lokhu kuholela emiphumeleni enjengokuthi:
ukugcwala okukhulu kwe-cholesterol egazini,
Ngakho-ke, labo abane-metabolic syndrome basengozini. Ngakho-ke, bangaba nesifo sohlangothi, ukukhuluphala, isifo sikashukela, ukufakwa kwe-myocardial nezinye izifo eziyingozi.
Kodwa-ke, ngokwehluleka kwe-metabolism ye-glucose, umuntu akelulami, kepha kunalokho, ulahlekelwe isisindo. Ukuqonda imbangela yalesi simo, udinga ukuxhumana nodokotela we-endocrinologist.
Imvamisa, amakhilogremu ahamba lapho umzimba ungenayo i-insulin nhlobo, ngenxa yokuthi awukhiqizwa ngenxa yezizathu ezithile. Lesi simo sivamile ukungasebenzi kahle kohlobo lwe-1 glucose metabolism.
Kodwa-ke, ukunciphisa isisindo ngohlobo 2 sikashukela ngaphandle kwemizamo cishe akunakwenzeka.
Ama-carbohydrate ekudleni kashukela
Ngenxa yokuthi ngesifo sikashukela kukhona ukwephulwa kwe-metabolism yama-carbohydrate, indlela enhle yokunciphisa isisindo nokubalwa kwegazi ukwelashwa kokudla.
Ngemuva kwakho konke, ukudla okukhethwe kahle kuphela kwabanesifo sikashukela abanomfutho wegazi ophakeme okunganciphisa ukungena kwezidakamizwa futhi kulahlekelwe ngamakhilogremu angeziwe ngaphandle kokulimaza umzimba kanye ne-psyche.
Kwabanesifo sikashukela, imigomo ejwayelekile yokudla okunempilo ithathwe. Kodwa-ke, ngaphambi kokudla, izici zomzimba womuntu ogulayo, inkambo ethile yalesi sifo, nezinye izici kuyabhekwa. Kubalulekile ukubonana nodokotela ozokunikeza indlela yokudla efanelekile.
Ukuze wehlise isisindo somfutho wegazi ophakeme kanye nesifo sikashukela, udinga ukwazi ukuthi ayini ama-carbohydrate. Bahlukaniswe ngamaqembu ama-2:
okusheshayo - kugayeka kalula,
kuhamba kancane - kuyinkimbinkimbi.
Owagcwalisa umzimba masinyane emzimbeni, ngenxa yawo okwanda okungazelelwe kokuxineka kweglucose egazini, okungadala ukuhlaselwa kwe-hyperglycemic. Ngaphezu kwalokho, lokho kudla kunika amandla amancane kuphela, futhi ingxenye yawo eyinhloko ifakwa njengamafutha. Ngakho-ke, ama-carbohydrate asheshayo kusuka ekudleni kungcono ngaphandle.
Imikhiqizo yokugaya kalula yile:
izithelo ezomisiwe nezithelo ezimnandi,
Kuyaphawuleka ukuthi abantu abakhuluphe ngokweqile basebenzisa ukudla okunjalo ngamanani amakhulu, okugcina sekukhuluphala kakhulu. Ngohlobo 2 sikashukela, ama-carbohydrate alula angadliwa, noma kunjalo, inani labo kufanele libe lincane.
Ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi afaka isinkwa sokusanhlamvu esiphelele, imifino nazo zonke izinhlobo zokusanhlamvu. Ukudla okucebiswe ngemikhiqizo enjalo kunempilo kakhudlwana, kepha udinga ukukudla ngokuhlakanipha lokhu, ngoba ukudla ngokweqile kungadala namafutha amaningi ukwakha futhi kwandise namazinga kashukela.
Ukwenza kube lula ukubala inani eliphelele lama-carbohydrate, kwakhiwa “amayunithi esinkwa”. Bayakuvumela ukuba ubale izinga le-glucose egazini, inkomba yalo ingu-2.8 mmol / L, kanti amayunithi ama-insulin amabili ayadingeka ukukwazisa i-XE.
Umuntu udinga i-25 XE ngosuku ukuze aphile ngokugcwele. Ngaphezu kwalokho, kufanele ihlukaniswe zibe izidlo ezi-5-6. Lokhu kuzogwema ukugeleza kweglucose futhi kusabalalise ukudla kwalo usuku lonke.
Ngaphezu kwalokho, ekubalweni okulungile kakhulu nelula kwamayunithi esinkwa, ungasebenzisa amatafula akhethekile.
Amafutha Esifo Sikashukela
Ukwehla isisindo ngesifo sikashukela sohlobo 2, okuhambisana nomfutho wegazi ophakeme, kubalulekile ukusebenzisa amafutha ngendlela efanele. Ngemuva kwakho konke, ukondleka okucebile ngalezi zinto ngeke kukunikeze ithuba lokunciphisa umzimba, kepha kuzokwengeza amakhilogremu angeziwe.
Ngaphezu kwezinkinga zobuhle, amafutha anikela ekwakhekeni kwama-plaque emithanjeni yegazi. Ngaphezu kwalokho, bafaka ukuzungeza izitho zangaphakathi, kubandakanya nenhliziyo, yingakho umsebenzi wawo uyinkimbinkimbi.
Ukufakwa ngokweqile kwamafutha kuholela ekunyukeni kwengcindezi yegazi kanye nengozi eyandayo yokuthola imivimbo kanye nokuhlaselwa yinhliziyo. Ngakho-ke, ukuze wehlise isisindo ngesifo sikashukela, udinga ukucabanga kabusha ngokudla kwakho bese ukhawulele ukungena kwamafutha emzimbeni. Ezigulini ezinesifo sikashukela nezifo ezinomfutho wegazi, umthamo ophelele we-lipid oza nokudla akufanele ube ngaphezu kwama-40 g ngosuku.
Kuyaqapheleka ukuthi amafutha, njengama-carbohydrate, ngokuya ngezinzuzo angahluka. Amafutha emifino kanye namafutha enhlanzi kubhekwa njengokubaluleke kakhulu, kepha ama-lipids wemvelaphi yezilwane ayingozi kakhulu.
Ukubalwa okulula, kudalwe amatafula abika inani lamafutha, ama-carbohydrate, amaprotheni ku-100 g womkhiqizo, kucatshangelwa okuqukethwe kwawo kilojoule.
Kuyaqapheleka ukuthi ngesifo sikashukela, ukudla okuningana kunomthelela ekwandeni komfutho wegazi:
izitsha zokubhema nezinosawoti.
Ngaphezu kwalokho, nge-hypertension kanye namazinga e-glucose aphezulu, kungcono ukuyeke ngokuphelele ukusetshenziswa kotshwala.
Yikuphi ukudla okulungele ukunciphisa isisindo sikashukela kanye nomfutho wegazi ophakeme?
Ukuze wehlise isisindo, iziguli ezinesifo somfutho wegazi ophakeme kanye nabanesifo sikashukela kufanele bahlaziye ngokudla kwabo. Ngale njongo, kuyadingeka ukudla isinkwa esikhethekile noma esimnyama ngenani elifinyelela ku-200 g ngosuku.
Isobho elilungiselelwe kuzinhlanzi ezi-2 noma ezi-3 noma umhluzi wenyama onemifino eminingi awusebenzi kangako. Kodwa-ke, zingadliwa njalo ngemuva kwezinsuku ezimbili, ezintathu.
Futhi, ngeshukela, inyama ebilisiwe ebilisiwe ivunyelwe:
inhlanzi (i-pink salmon, i-pollock, i-hake),
inyoni (inkukhu, ikhukhu),
inyama yenkomo nezinto.
Ngokuphathelene okusanhlamvu, preference kufanele inikezwe amabele, i-buckwheat ne-oatmeal. IMacaroni kungcono ukuyikhetha ezinhlotsheni zokuqala zikakolweni, udinga ukuzidla ngokulinganisela futhi kangcono ngaphambi kwasemini. Kuyaqapheleka ukuthi uma imenyu iqukethe i-pasta nezinhlamvu, khona-ke inani lesinkwa kufanele lilinganiselwe.
Imifino nazo zonke izinhlobo zemifino nakho kusiza kakhulu, ngaphandle kwamazambane kanye nezaqathi, ngenxa yobuningi besitashi. Ngakho-ke, inani labo akufanele libe ngaphezulu kwama-200 g ngosuku. Yonke eminye imifino ivunyelwe ukudla ngamanani amaningi ngendlela eluhlaza, ebilisiwe noma ebhakwe.
Ushukela-ubisi nemikhiqizo yobisi kuvunyelwe ngamanani amancane. Kepha amaqanda, akukho zingcezu ezingaphezu kwezimbili ezingadliwa ngosuku.
Esikhathini sikashukela i-mellitus, ukuze wehlise isisindo, ukukhetha kufanele kunikezwe izithelo ezimuncu noma kancane ezomnandi namajikijolo (aze afike ku-300 g ngosuku). Zingafakwa ku-dessert, kuphekwe ama-compotes kubo noma zenze amajusi.
Kuyaqapheleka ukuthi ukudla kufanele kube ngokuxutshanayo. Ngakho-ke lonke inani lokudla kufanele lihlukaniswe izingxenye ezincane okufanele zidliwe usuku lonke.
Ezinye izindlela zokunciphisa umzimba
Ukuze ulahlekelwe isisindo esifanelekile futhi ngaphandle kwenkathazo, ukudla kuphela kungenzeka kunganele. Ngakho-ke, ngezinkinga ezinesisindo eseqile, kubalulekile ukuthi uphinde uyihlolisise indlela yokuphila. Ukuze sifinyelele lokhu, kufanele siyeke imikhuba emibi (utshwala, ukubhema) bese siyangena kwezemidlalo.
Iqiniso ngukuthi ngesikhathi sokuzivocavoca, ukugeleza kwegazi kusebenze, izicubu zigcwele umoya-mpilo, futhi izinqubo ze-metabolic zijwayelekile. Ekuqaleni, umsebenzi womzimba kufanele ube olinganiselayo. Kungcono ukuqala ngokuhamba isigamu sehora ngejubane elisheshayo nokuzivocavoca kwasekuseni.
Kwisifo sikashukela, le midlalo elandelayo iyanconywa:
Kodwa-ke, akufanele weqe ngokweqile, ngoba uma ukucindezelwa kwe-glucose kukhuphukela ku-11 mmol / l, khona-ke ngaphambi komzuzu wokujwayelekile kwaso kuzodingeka ushiye ngokuphelele ezemidlalo.
Kunezinhlobo ezikhethekile ezakhiwa odokotela nabaqeqeshi kubantu abatholakala benesifo sikashukela sohlobo 2. Uhlu lwesampula lokuzivocavoca:
Ukufudumala - ukugoqa kusuka kuzwane kuya esithendeni noma ukuhamba endaweni ngokusheshisa okuhlukile nokuncipha kwesivinini.
Ukuhamba kufakwa ukujikeleza kwekhanda ngakwesobunxele, bese kuthi ngakwesokunene okuphambene nalokho.
Ukuhamba okuyindilinga kwamahlombe, izindololowane nezandla kuqala ngokuhlukile, bese kuhlangana.
Amandla okuzivocavoca ngama-dumbbells (akukho ngaphezulu kwemizuzu eyi-10).
Ukuhamba endaweni ngejubane elihamba kancane.
Ividiyo ekulesi sihloko izokutshela ukuthi ungadla kanjani ngesifo sikashukela.
Imaphi amaphilisi we-hypertension engingawaphuza nesifo sikashukela?
Isifo sikashukela isifo sikashukela yisifo sohlelo lwe-endocrine, lapho ukumuncwa kweglucose emzimbeni kuthinteke khona, okuholela emiphumeleni emibi kakhulu. Uma umuntu enezixilongwa ezimbili ngasikhathi sinye: isifo sikashukela kanye nomfutho wegazi ophakeme, khona-ke kudingeka aqaphele ekukhetheni kwemithi futhi aphile impilo ekhethekile.
Yini ejwayelekile kushukela?
Ngesifo sikashukela, ukuntuleka kwe-insulin ngokuphelele noma okuhlobene nokwakheka emzimbeni kwakhiwa emzimbeni, ngenxa yokuthi kwakheka i-hyperglycemia, ukumetheka nokufakwa kwe-carbohydrate, amaprotheni, amafutha kanye namaminerali kuyaphazamiseka. Lesi yisifo esingelapheki esibangelwa ukuqunjelwa izakhi zofuzo lomuntu.
Kunezinhlobo ezimbili zesifo sikashukela:
Uhlobo lokuqala. Ama-pancreas awakhiqizi nhlobo noma akhiqize inani elincane le-insulin ye-hormone. Ukuxilongwa kwenziwa esemncane. Lolu uhlobo lwesifo oludinga i-insulin.
Uhlobo lwesibili. Kukhula ngokuba ngabantu abadala abaphila impilo yokungasebenzi futhi bakhuluphele ngokweqile. I-pancreas ayakhiqizi isamba esidingekayo se-insulin noma i-insulin ekhiqizwayo ayimunwa ngumzimba. Ngokwesifo sikashukela sohlobo 2, amathuba okuthola lesi sifo isifo aphezulu.
Kunezizathu ezimbili zokuthi kungani amazinga kashukela wegazi enyuka:
Ukusuka kuma-carbohydrate aqhamuka ekudleni kuya emzimbeni.
Kusuka glucose ongena ohlelweni lokujikeleza kusuka esibindini.
Uma umuntu eyeka ukudla ukudla okuqukethe i-carbohydrate, ushukela usazongena egazini eliphuma esibindini. Ngokukhiqizwa okunganele kwe-insulin, ukugcwala koshukela osegazini kuzodlula inani elivumelekile.
Umfutho wegazi ophezulu noshukela
Kumuntu ophila nesifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme (i-BP) ugcwele imiphumela emibi. Umfutho wegazi ophakeme unyusa amathuba wokuhlaselwa ngokungazelelwe noma ukuhlaselwa yinhliziyo. Ngaphezu kwalokho, ukwehluleka kwezinso kungenzeka, ubumpumputhe bungavela, i-gangrene ikhule ngokunqunywa okwengeziwe. Ngomfutho wegazi ophakeme, kubalulekile ukubuyisa umfutho wegazi ngokushesha ubuye. Kumuntu onesifo sikashukela, izinga lokucindezela le-140/90 mmHg. Ubuciko. isivele ibhekwe njengephakeme futhi idinga ukwehla kwangaphambi kwesikhathi.
Yiziphi izimbangela zomfutho wegazi ophakeme uma ngabe kukhona oshukela vele?
Ngesifo sikashukela sohlobo loku-1, umfutho wegazi ophakeme awakhiwa ngokushesha, kodwa ngeminyaka. Isizathu esikhulu salokhu ukulimala kwezinso (isifo sikashukela). Ngalesi sizathu, umfutho wegazi ophakeme uthuthuka ngo-80% wohlobo lweshukela sikashukela. Ama-20% asele asebekhulile, akhuluphele, ubunzima bezinzwa nokuxineka.
Ngohlobo 2 sikashukela, umfutho wegazi ophakeme ukhula ngezizathu ezifanayo. Umehluko kuphela ukuthi i-nephropathy yesifo sikashukela ibalelwa kuma-20% amacala. Ingxenye yesithathu yawo wonke amacala yenzeka kumfutho wegazi ophambili (ukucindezelwa, ukusweleka kwe-magnesium, isifo sokuqina kwemithambo yegazi) kanye nama-40% emgomeni wegazi ohambisana nokuguga.
Ukuthuthukiswa komfutho wegazi ophezulu ngohlobo 1 sikashukela
I-Diabetes nephropathy noma ukulimala kwezinso yisona sizathu esikhulu sokwakhiwa kwe-hypertension ngohlobo 1 sikashukela. Izinso ziqala ukungahambi kahle nosawoti we-sodium kumchamo. Ukuxineka kwabo kuyakhuphuka, futhi umzimba uqongelela umthamo wamanzi ukuze ucwilise i-sodium. Ngokunyuka kwethamo lamanzi, umthamo wegazi emzimbeni uyakhuphuka, okuholela ekwandeni komfutho wegazi.
Kubukeka sengathi izinkinga zomfutho wegazi ophakeme nezinso zihlanganisa ukuphelelwa yithemba. Umzimba uzama ukwenza ukungasebenzi kahle kwezinso, okuvusa ukukhula kwengcindezi. Ukwanda kwengcindezi yegazi kuholela ekwandeni kwengcindezi ezintweni zokuhlunga kwezinso. Ngokuhamba kwesikhathi, baqala ukufa, okuyinto ekhathaza umsebenzi womzimba. Ngokuhamba kwesikhathi, lo mjikelezo onesihluku uphela ekuhlulekeni kwezinso. Ukwelashwa kwe-hypertension okuqale ngesikhathi ngesifo sikashukela salolu hlobo kungenzeka kususe imiphumela emibi.
Ukukhuphula umfutho wegazi kanye nohlobo 2 sikashukela
Kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 2, ukugcwala okukhulu kwe-insulin egazini kusebenza njengomthombo wokucindezela okwengeziwe. Ngokuhamba kwesikhathi, ingcindezi ikhuphuka ngenxa ye-atherosclerosis kanye nesifo sezinso. Imvamisa ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, umfutho wegazi ophakeme ungakhuli ngaphambi kokuxilongwa. Kungatholwa ngasikhathi sinye nesifo sikashukela.
Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, kubalulekile ukulandela ukudla okune-carb ephansi. Lokhu kuzosiza ukubhekana nabo bobabili umfutho wegazi ophakeme noshukela wegazi.
Yiziphi izinkomba zokucindezela kwegazi okujwayelekile ezigulini ezinesifo sikashukela
Kumuntu ophile kahle, indlela ejwayelekile yokucindezela kwegazi ifinyelela ku-139/9 mm RT. Ubuciko. Konke okuphakeme yi-hypertension. Kubantu abanesifo sikashukela, amathuba okuba nesifo esiyinkimbinkimbi sesifo senhliziyo siphezulu. Ngakho-ke, izinga lokucindezela kwabo liphansi kune-140/90. Kungcono ukuya ezingeni le-130/85. Kepha amaphilisi okufaka umfutho wegazi ophezulu kushukela kufanele athathwe ngokucophelela. Ukucindezela okungazelelwe okungavunyelwe akuvunyelwe. Kufanele incishiswe kancane.
Izidakwamizwa ezihanjiswa yisifo sikashukela
Ukwelashwa kwe-hypertension kushukela sikubaluleke kakhulu. Ngokushesha nje lapho sekuqalisiwe, kuphakama amathuba okugwema imiphumela emibi evela emzimbeni, kusuka kumfutho wegazi ophakeme. Isinqumo ngokuhlinzekwa kwemithi nemithamo yaso kufanele senziwe ngudokotela oholayo, kucatshangelwa izinga lokuthuthuka kwesifo sikashukela nezifo ezihlobene naso.
Kunamaqembu ayinhloko emithi yesifo sikashukela kanye nomfutho wegazi ophakeme:
ama-diuretics noma ama-diuretics,
Ama-inhibitors e-ACE nama-angiotensin II receptor blockers.
Amacwecwe e-diuretic kashukela onesifo somfutho wegazi ophakeme
Umfutho wegazi ophezulu kushukela uvame ukuhlotshaniswa nomthamo owengeziwe we-fluid, okuyigazi elijikeleza ohlelweni lokujikeleza kwegazi. Ngaphezu kwalokho, usawoti uyagcinwa emzimbeni ophazamisa ukukhipha uketshezi. Imithi ye-diuretic isiza ukususa uketshezi ngokweqile, ngaleyo ndlela yehlise umfutho wegazi. Odokotela bavame ukunquma ama-diuretics ngokuhambisana nezinye izidakamizwa okuhloswe ngawo ukwelapha umfutho wegazi ophakeme.
Ama-β-blockers okwehlisa umfutho wegazi kushukela
Odokotela abakafinyeleli esivumelwaneni sokusetshenziswa kwe-beta-blockers ngesikhathi sokwelashwa komfutho wegazi ophezulu kubantu abanesifo sikashukela. Ngakolunye uhlangothi, le mishanguzo inciphisa umfutho wegazi kahle, ngakolunye uhlangothi, ineziphambeko eziningi, ezibandakanya nesifo sikashukela.
Uma udokotela ohambelayo esenqume ngokuqokwa kwe-beta-blocker, khona-ke isiguli, ngaphezu kwesifo sikashukela, kungenzeka ukuthi sitholakala kwesinye salezi zifo ezilandelayo:
ifomu elibi lesikhathi sasemuva kokuqamba.
Amathuba wokushayisana kokusetshenziswa kwe-beta-blockers kufanele abe ngaphansi kunokuthiwa umphumela onzima ovela ezifweni ezihlangene.
Ama-Inhibitors (blockers) eziteshi ze-calcium ngenkambo efanayo ye-hypertension kanye nesifo sikashukela
Izidakamizwa ezinjalo ziyasebenza impela futhi zichazwa njalo ngabelaphi ukuze sinciphise ingcindezi kwisifo sikashukela. Ngokuqapha ngokweqile, ama-calcium blockers kufanele athathwe ezigulini ezinesifo senhliziyo esitholakele. Ikakhulu uma esikhathini samanje kukhona i-infraction ebukhali ye-myocardial, i-angina engazinzile noma ukuhluleka kwenhliziyo.
Ama-inhibitors e-ACE nama-angiotensin II receptor blockers
Amalungiselelo we-hypertension ku-mellitus yesifo sikashukela, okulesi sigaba, anqunywa njalo lapho kuba khona amathuba ezifo zezifo ezinso. Uma isiguli sitholakala sinesifo sikashukela noma ukwehluleka kwenhliziyo, khona-ke ama-inhibitors e-ACE anqunywa yimithi esemqoka ohlelweni lokwelashwa. I-Angiotensin II receptor blockers iyiqembu lesimanje kakhulu lezidakamizwa kunama-ACE inhibitors. Zinqunyelwe njengenye indlela ye-ACE inhibitors.
Ungayikhetha kanjani imithi efanele yokwelapha i-hypertension kanye nesifo sikashukela
Iqembu ngalinye lezidakamizwa lihlose ukucindezela izinkinga ezithile emzimbeni, ekugcineni okuzoholela ekunciphiseni komfutho wegazi ophakeme. Uma umfutho wegazi ophakeme utholakala ukuthi unesifo sikashukela, kungenzeka ukuthuthukisa izifo eziningi ezifanayo eziba nomthelela ekunyuseni kwengcindezi.
Kulokhu, umuthi weqembu elilodwa ngeke ukwazi ukusiza. Udokotela ohambelayo ubheka zonke izifo kule nkimbinkimbi, bese enquma ukunikezwa kwemithi.
Musa ukungawunaki ukunikezwa kadokotela, ngoba ubungozi bezinkinga kusuka ku-hypertension kushukela likhuphuka kaningi. Ngasikhathi sinye, ukukhetha izidakamizwa ngokwakho, ngaphandle kokudlula zonke izivivinyo ezidingekayo nokuhlolwa okuphelele, akunakwenzeka futhi kumane nje kuyabulala.
Izindlela zendabuko zokwelapha umfutho wegazi ophezulu kushukela
Indima ebalulekile ekwelapheni umfutho wegazi ophakeme kanye noshukela kudlalwa ngokudla kweziguli. Kunemikhiqizo eminingana ukusetshenziswa kwayo kwenqatshelwe ngokuphelele. Ngasikhathi sinye, ezinye izinhlobo zokudla neziphuzo zinomphumela omuhle emzimbeni wesiguli. Imenyu ye-hypertension kanye nesifo sikashukela kufanele ibe ngaphansi kuma-carbohydrate. Lokhu ngeke kusize kuphela ukwehlisa ushukela wegazi, kodwa futhi nomfutho wegazi ophansi.
Kunenqwaba yamakhambi, i-decoction yayo izosiza kafushane ngosizo lomfutho wegazi ophezulu kwisifo sikashukela. Kepha ungazilahli izindlela zendabuko zokwelashwa. Udokotela kufanele aqaphe isimo sokuhlolwa kanye nenhlala-kahle yesiguli, uma kungenjalo, izinqubo ezingenakulungiswa zingaqala emzimbeni.
Izisekelo Eziyisisekelo Zokudla Okuphezulu Kwe-Cholesterol
Ucwaningo oluningi lukhombisa ukuthi ukudla okuqukethe i-cholesterol ephezulu kunganciphisa kakhulu amathuba okuthuthukisa i-pathologies ye-inhliziyo. Kodwa-ke, ukudla okunjalo akuhileli kuphela kwimikhiqizo equkethe inani elincane le-cholesterol, kucatshangelwa ezinye izinto eziningi.
Izinqubo ze-metabolic emzimbeni zivame ukulingana. I-cholesterol iyasiza ekuhlanganiseni kwama-hormone namavithamini, ivikela amaseli nemithambo yegazi, kanye nokuntuleka kwayo, ngokulandelana, kuhlotshaniswa nokuphulwa kwalezi zinqubo. Inani elikhulu le-cholesterol nalo alisebenzi kakhulu: livame ukuqongelela odongeni lwemithambo yegazi ngendlela yamapulangwe, okubangela isifo sokuqina kwemithambo yegazi, isifo lapho i-lumen yemithambo incipha futhi ukuphuma kwegazi kuphazamisekile.
I-cholesterol ye-HDL, lipoprotein ephezulu kwabantu.
I-cholesterol ye-LDL, ama-lipoprotein aphansi kwabantu.
Zombili lezi zinhlobo zilinganiselana. Lapho okuqukethwe kwe-LDL kukhuphuka, cholesterol inqwabelana ngobuningi obukhulu, ngoba umsebenzi oyinhloko we-HDL ukususa ngokweqile kwayo. Ngakho-ke, lokhu kudla kufanele kucatshangelwe ngendlela yokuthi uhlobo olulodwa lwe-cholesterol - enhle (HDL) - lukhuphuke bese olunye luye phansi. Njengoba kwenzeka, kuncike ekusetshenzisweni kwamafutha, hhayi kuphela inani lawo, kodwa futhi nohlobo. Amafutha agciniwe kanye nama-trans fat akhulisa i-cholesterol yegazi, ephansi ye-polyunsaturated ne-monounsaturated.
Ngaphezu kwabantu abaphoqelelwa ukuthi badle ngale ndlela nge-cholesterol ephezulu, ukulandela ukudla kwe-hypocholesterol, lokhu kuyadingeka nakubantu abanezifo noma izimo ezithinta amazinga abo e-cholesterol. Izifo ezifana nalezi zifaka phakathi:
ukuhlaselwa yinhliziyo noma unhlangothi,
ukuthambekela kwe-cholesterol ephezulu,
Ukulandela ukudla okunjalo akukufanele kubantu abathi, ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, babe ne-cholesterol ephansi yegazi. Ngakho-ke, ngaphambi kokuqala noma iziphi izinguquko ekudleni, vakashela udokotela.
Yiziphi izimiso eziyisisekelo zokudla okunjalo?
Ukuze sinciphise ubungozi be-atherosclerosis nge-cholesterol ephezulu, kufanele kulandelwe le mithetho elandelayo:
Yidla ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi: izinkwa zokusanhlamvu okuphelele, imifino, izithelo, okusanhlamvu Ngaphezu kwesigamu esidliwayo ngosuku kufanele kube ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi. Isinkwa kufanele sidliwe ngefulawa ye-bran noma ye-rye. Okungenani ingxenye yesithathu yezithelo nemifino oyidla nsuku zonke kufanele kube okusha.
Nikeza ukuthanda izinkukhu, izinhlanzi nemikhiqizo yobisi, njengomthombo wamaprotheni. Ukudla inyama ethosiwe, ebilisiwe noma ebhakwe kusiza kakhulu kunokuthosiwe noma ukubhema. Ngaphezu kwalokho, kumele ibe nokwehla.
Akudingeki udle ushukela ungabi ngaphezu kwama-50 g ngosuku, futhi uma kwenzeka isifo sikashukela - umthamo waso kufanele ungabi ngaphezu kwe-3% yayo yonke imikhiqizo.
Ukudla kokugcina kufanele okungenani kube amahora angama-2-2 ngaphambi kokulala, futhi kufanele kube lula. Ukudla kwansuku zonke kufanele kuhlukaniswe izidlo ezingama-4-5 ngezingxenye ezincane.
Akukho ngaphezu kuka-3 g kasawoti ngosuku. Usawoti ugcina uketshezi emzimbeni, obangela ukwanda kwengcindezi. Akunconyelwe futhi ukuyikhipha ngokuphelele, ngoba i-sodium iyadingeka emzimbeni.
Ubudlelwano besifo sikashukela kanye nomfutho wegazi ophakeme
Kubantu abanesifo sikashukela i-mellitus, ukufundwa kwengcindezi yegazi ka-130/85 kubhekwa njengokungeqile komfutho wegazi.
Njengomthetho, umfutho wegazi ophakeme ngemuva kwesizinda sikashukela sohlobo 1 awukhuli masinyane, kodwa kuphela emva kweminyaka embalwa. Uma isiguli sitholakala sinesifo sikashukela sohlobo 2, ke izinga eliphakeme lokucindezela libonakala cishe ngokushesha.
Inhlanganisela ye-hypertension kanye nesifo sikashukela kuboniswa yizimpawu ezilandelayo:
mnyama mnyama emehlweni, isiyezi nobuthakathaka ngesikhathi sokunyakaza okungazelelwe,
ukuphazamiseka kokulala, ukuqwasha,
amathuba amakhulu okulahlekelwa ukwazi,
izinga lokucindezela emikhunjini alinciphi ngisho nasebusuku.
Umfutho wegazi ophezulu kushukela ungadalwa yilezi zizathu ezilandelayo:
Kufanele kubhekwe ikakhulukazi ingcindezi eyandayo, evela ngemuva kwesisindo esengeziwe. Imvamisa lesi simo sicasulwa ukungabekezeleli ama-carbohydrate, okubangela ukwanda okubukhali koshukela wegazi.
Ngenhlanganisela ehlangene ye-hypertension kanye nesifo sikashukela, ukwehla okungazelelwe kwamazinga wegazi kanye nokushintsha kwesikhundla somzimba kuvame ukubonwa. Le nto ibizwa ngokuthi yi-orthostatic hypotension.
Umfutho wegazi ophezulu kubantu abanesifo sikashukela udinga ukulawula okuqinile. Kuyadingeka ukuhlola lezi zinkomba kaningana ngosuku.
Ukuhambisana nemigomo yokudla okwelaphayo ngenhlanganisela yesifo sikashukela kanye nomfutho wegazi ophakeme kuyingxenye ebalulekile yokwelashwa. Lokhu kungenxa yokuthi ezimweni eziningi, iziguli zinomlando wokuphazamiseka kosawoti emzimbeni. I-pathology enjalo ivusa ukubambezeleka koketshezi oluningi emzimbeni kanye nokwanda komfutho wegazi.
Ngakho-ke, ukunamathela ezimisweni eziyisisekelo zokudla okunempilo, okunconyelwe lezi zifo - ungalungisa inani lamanzi egazini bese wehlisa nengcindezi.
Ngaphezu kwalokho, ukukhishwa kwezigaba ezithile zemikhiqizo kusuka ekudleni noma ukuncishiswa kokusetshenziswa kwazo kuqeda amathuba okukhula kokuhlushwa kweglue glucose.
Ukuze wenze kube lula ukulandela imigomo yokudla kokudla - kunconyelwa ukudala imenyu yezinsuku ezimbalwa noma isonto.
Ibhulakufesi: i-oatmeal emanzini, isiphuzo esivela ku-chicory.
Isinambuzane: I-cracker engafakiwe, i-compote yezithelo eyomile.
Isidlo sasemini: i-borsch enamafutha aphansi, isaladi yemifino, inyama yenkomo ebilisiwe, itiye ngaphandle koshukela.
Ukudla kwakusihlwa: isidlo semifino, isiphuzo sesinkwa esiphelele sokusanhlamvu, isiphuzo se-rosehip.
Ukudla kwasekuseni: i-buckwheat, ucezu lweshizi enamafutha amancane, isiphuzo sekhofi.
Ungadla: ushizi wekhokho onamafutha amancane.
Isidlo sasemini: isobho yemifino enomhluzi onamafutha amancane, i-cod ebhakwe, ama-beeted angama-stewed, itiye.
Ukudla isidlo sasemini: Isigaxa senyama enamafutha amancane, isaladi yemifino, itiye.
Ukudla kwasekuseni: ama-pancake e-cottage shizi abhakwe ku-cottage shizi ophansi, isiphuzo sekhofi.
Ungadla: i-apula, isiphuzo se-rosehip.
Isidlo sasemini: isobho seklabishi kumhluzi onamafutha aphansi, i-broccoli enosiwe, ifilidi le-turkey ebilisiwe, itiye, isipuni sesinkwa sonke sokusanhlamvu
Ukudla kwakusihlwa: i-vinaigrette, izinkukhu ezinamafutha ezinkukhu, itiye.
Ukudla kwasekuseni: i-buckwheat porridge, isiphuzo se-chicory.
Isinaphi: isangweji lesinkwa sokusanhlamvu esine-ushizi onamafutha amancane.
Isidlo sasemini: isobho elinama-borde wenyama yenkomishi, iklabishi elihanjisiwe, ucezu lwesinkwa esiphelele sokusanhlamvu, i-compote yezithelo eyomile.
Ukudla kwakusihlwa: isaladi elifudumele likabhontshisi aluhlaza, amaqanda nolimi lwenyama ebilisiwe, itiye.
Ukudla kwasekuseni: i-oatmeal, ucezu lweshizi enamafutha amancane, isiphuzo esivela ku-chicory.
Isinaphi: I-cracker engafakwanga (akukho ngaphezulu kwama-3 ama-PC.), Tea ngaphandle koshukela.
Isidlo sasemini: isobho yemifino, isifuba senkukhu esibhakiwe notamatisi noshizi onamafutha aphansi, ucezu lwesinkwa sonke sokusanhlamvu, itiye.
Ukudla kwakusihlwa: i-cod ebhakwe, imifino entshontshiwe ethosiwe, izithelo ezomisiwe zezithelo.
Ngokusekelwe kunketho yemenyu ehlongozwayo yeviki, ungenza inani elikhulu lokuhlanganiswa okufanayo. Lokhu kwenza ukuthi kudliwe okuhlukahlukene, okulinganiselayo futhi okumnandi.
Ukuze ungazitholi usizi ngesikhathi sokugcinwa kokudla, kuyanconywa ukuthi ungabi lazy ukupheka futhi usondele kulungiswa kwezitsha ngokunakekelwa okukhethekile.
Ngezansi kuphekelwa izitsha ezilula futhi ezihlwabusayo ezivunyelwe kubantu abanesifo sikashukela, abahlushwa umfutho wegazi ophakeme.
Ama-cheesecake ayi-Oven abhakwe
Sula i-500 g ye-cottage shizi ngo-2% ngesihlungo noma uxove ngemfoloko kuze kutholakale isisindo esiningi. Faka iqanda lenkukhu eli-1, uhhafu wengilazi kafulawa, i-sweetener ukunambitha, ingcosana kasawoti.
Zonke izithako zixube kahle. Ukusuka kwisisindo esivele umphumela ukwakha ama-cheesecake, asakazwa ekhasini lokubhaka.
Bhaka kuhhavini kuze kube nsundu yegolide imizuzu engaba ngu-15 emazingeni okushisa angama-180 degrees.
Yonke imifino kusuka ohlwini oluvunyelwe ilungele ukulungiselela lesi sidlo. Ezasetshenziswa kakhulu yi-zucchini, isitshalo seqanda, utamatisi, upelepele wensimbi, izaqathe, u-anyanisi negalikhi.
Dice yonke imifino, uthele epanini elijulile. Faka amanzi amancane bese ubila phezu kokushisa okuphansi cishe imizuzu engama-40.
Faka usawoti kanye nopelepele ukunambitha.
Isaladi elifudumele likabhontshisi aluhlaza, amaqanda nolimi lwenyama
Bilisa ulimi emanzini anosawoti, opholile, ususe ifilimu. Sika ibe yimichilo emincane.
Bilisa iqanda, lipholile, lisike likhulu ngokwanele bese ulengeza olimini. Bilisa ubhontshisi oluhlaza emanzini abilayo imizuzu emi-5. Hlanganisa zonke izithako, engeza uwoyela omncane we-olive.
Ukulandela ukudla okhethekile kwesifo sikashukela kanye nomfutho wegazi ogcwele kuyingxenye ebalulekile yokwelashwa. Ngaphandle kokubheka izincomo zokudla okunempilo, akunakwenzeka ukuthola umphumela omkhulu kusukela ekwelashweni ngemithi.
Ukukhishwa ekudleni kwamaqembu okudla okwenza ukuthi bagxume ekuxinweni koshukela kanye nengcindezi eyandayo - kusiza ekugcineni zonke izinkomba kukujwayelekile.
Kodwa-ke, njenganoma yikuphi ukwelashwa - ukudla okudinga ukwelulekwa ngaphambi kokuhlinzwa. Uchwepheshe kuphela ozokwazi ukukhetha ukudla okufanele okuzozuzisa isimo sesiguli.
Awukwazi ukuzindla ngokuzimele futhi uthathe isinqumo sokuzimela ngokuzimele noma ngokusetshenziswa komkhiqizo othile.
Ukudla okufanayo, kodwa kuphekwe ngezindlela ezahlukahlukene, kungathinta i-cholesterol yakho. Ukuze unqume ukuthi i-cholesterol inyuke kanjani ngesikhathi sokupheka:
Awukwazi ukupheka ku-lard noma ibhotela, unikeze okuthandayo kumafutha zemifino. Ngaphansi kwethonya lamafutha ezilwane, ukufakwa kwe-cholesterol emathunjini kuyanda.
Gqoka amasaladi ngamafutha omnqumo noma owama-sunflower, kodwa ukupheka ngamafutha angachazwanga akukufanele.
Zama ukungadli ukudla okuthosiwe noma okubhemayo, ikakhulukazi imikhiqizo yezilwane.
Yikuphi ukudla engingakudla futhi okungekho?
1) Ubisi, ukhilimu kanye no-ukhilimu omuncu kufanele kuthathwe ngokuqukethwe okunamafutha amancane, ngoba aqukethe amafutha amaningi e-asidi nama-cholesterol. Ngokuqondene nemikhiqizo yobisi efana ne-kefir noma i-yogurt, akufanele ihlukunyezwe, yize ingadliwa ngaphezu kwemikhiqizo yobisi, inikeze okuthandwa kakhulu ngama-yogurts aphansi kanye noshizi we-cottage shizi. Ithebula libonisa okuqukethwe i-cholesterol kwimikhiqizo yobisi nemikhiqizo yobisi nge-100g.
I-yogurt engenamafutha noshizi we-cottage shizi
Ubisi ne-kefir 1%
Ubisi 2%, yoghurt ethambile ne kefir
Ubisi 3-3,5%, ukhokho ushizi 20%
Ubisi lweCow 6%
Ukhilimu omuncu, ukhilimu, ushizi we-cottage 10%
Usawoti ukhilimu 30% amafutha, ukhilimu 20-30%
2) Ungadla ushizi - konke kuncike ezinhlobonhlobo zawo namafutha amaningi. Ungadla ushizi ongenamafutha futhi owenziwe ekhaya. Zama ukungadluli isilinganiso samafutha angama-25-30%. Ithebula libonisa inani le-cholesterol ku-shizi, ngokuya ngokuqukethwe kwamafutha nezinye izinhlobo.
Ushizi owenziwe ekhaya - 0.6%
Okwenziwe ekhaya - 4%, izimvu - 20%
Ushizi Limburg, Romadur - 20%
Ushizi 30% amanoni
Amafutha angama-45%, isb. Tilsit, Camembert
Okuqukethwe kwe-Cream ushizi kwama-60%
3) Inyama idliwe kahle inciphile. Ungadla inyama yenkomo, iwundlu kanye ne-veal. Ukwenqaba inyama ebomvu kungaholela ngokuphelele ekwehleni kwe-hemoglobin egazini, kodwa kungcono ukwenqaba ingulube. Awungeke ukudla imikhiqizo eseqedile ne-offal - acebile kakhulu ngama-cholesterol namafutha angasebenzi.
Izinkukhu zingadliwa ngobuningi, kepha-ke, okuthandwa kunikezwa inkukhu ne-turkey, esikhundleni sama-goose noma amadada. Ngaphezu kwamafutha, khipha nesikhumba ngaphambi kokudla. Kungcono kakhulu ukupholisa umkhiqizo ngemuva kokupheka bese uqoqa amanoni asefile. Ama-broth inyama yenyama nawo awanconywa.
4) Inhlanzi inothile ngamafutha e-omega-3 asiza i-cholesterol ephansi, ngakho-ke kufanele idliwe okungenani amahlandla ama-3 ngesonto. Ngaphezu kwalokho, izinhlanzi zasemanzini nazo ziqukethe iodine, namanye amavithamini namaminerali. Izinhlobo zezinhlanzi ezigcwele i-cholesterol:
Ngaphezu kwalokho, okudla kakhulu.
5) Izinganekwane ezinkulu kakhulu eziphathelene ne-cholesterol nezinga layo kuhlotshaniswa nokusetshenziswa kwamaqanda. Nazi ezinye zazo:
Amaqanda aqukethe i-cholesterol eningi. Kuliqiniso, ingxenye enkulu yayo igxilizwe ku-yolk, kodwa-ke, kumaprotheni akwanele, ngakho-ke, amaprotheni angadliwa kunoma yiliphi inani.
Amaqanda ama-Quail ane-cholesterol encane kunamaqanda enkukhu. Le yinganekwane, eqinisweni, uma ubala isisindo seyunithi ngayinye ye-cholesterol emaqanda izigwaca ngaphezulu.
I-cholesterol emaqanda ilimaza kuphela futhi awukwazi ukuyidla. Lokhu futhi akulona iqiniso ngokuphelele, ngaphandle kwe-cholesterol, i-yolk iqukethe i-lecithin, ekala umphumela wayo olimazayo.
Ngakho-ke, akufanele ngokuphelele ukwenqaba amaqanda, kepha ama-yolks asadinga ukudliwa kaningi.
6) Izithelo nemifino.
Ukufa okuncane kakhulu eYurophu okuqhamuka kwisifo senhliziyo emazweni lapho iningi labahlali linamathela ekudleni kweMedithera. Lokhu kudla kulandela umthetho oyisisekelo - ama-5 servings wezithelo nemifino ngosuku. Imifino nezithelo akuwona nje kuphela umthombo wamaprotheni, amafutha kanye nama-carbohydrate, aqukethe inani elikhulu lamaminerali kanye nezinto zokulandela umkhondo.
7) imikhiqizo Flour.
Ukudla nge-cholesterol ephezulu akubeki eceleni ukusetshenziswa kwefulawa. Kodwa-ke, imikhiqizo evela kufulawa kakolweni iholela ekuqongeleleni isisindo ngokweqile, ngakho-ke kunqunyelwe kangcono ekubhaka kusuka okusanhlamvu okugcwele, i-bran, ufulawa we-wholemeal IMacaroni idliwa kangcono kukakolweni we-durum.
8) Amaprotheni amaningi emifino ne-fiber-soluble fiber - i-pectin - aqukethe ama-legumes. Behlisela kahle izinga le-cholesterol egazini futhi banegalelo ekuthanjisweni kabusha kwama-cholesterol plaque. Ukuzidla kunempilo enhle.
9) Utshwala. Olunye ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukuphuza utshwala okulinganiselayo kuvikela umzimba kusuka ku-atherossteosis kanye nasezinhlakeni zenhliziyo. Kepha akubona bonke odokotela abeza nombono ofanayo, abaningi baphikisana ngobungozi botshwala. Kunoma ikuphi, ukusetshenziswa kwayo ngokweqile kuzokwenza isimo sibe sibi kakhulu.
10) Ngesikhathi sokulungiswa kwekhofi, kuphuma inani elithile lamafutha kubhontshisi wekhofi, ngakho-ke labo abalandela ukudla nge-cholesterol ephezulu kufanele futhi bagweme ikhofi. Kepha itiye liphambene. Ingasetshenziswa ukwehlisa i-cholesterol. Kubaluleke kakhulu ukuthi ibe sezingeni eliphezulu hhayi emasakeni, ngoba itiye elinjalo lilungisiwe kusuka kumdoti. Lokhu kusebenza kuzo zombili itiye eliluhlaza namnyama.
11) Eminye imikhiqizo ye-cholesterol angamantongomane. Njengoba wazi, amantongomane aqukethe inani elikhulu lama-kilojoule futhi awanconywa kubantu abanezifo ezithile ze-gastrointestinal. Kodwa-ke, amafutha asemantongomane awakahlanganisiwe futhi aqukethe amafutha emifino, ngakho-ke amantongomane anendawo yokunciphisa cholesterol.
Kulabo abafuna ukufeza i-cholesterol ephansi emzimbeni, kubalulekile ukukhumbula ukuthi indlela yokuphila enempilo nokuzivocavoca umzimba kuzokusiza kungabi ngaphezu kokudla. Vele, nge-cholesterol ephezulu, udinga ukulandela indlela yokudla, kepha zonke izindlela kufanele zihlangane. Akunakudlula ukuthi ungaqhubeka nesiteleka sendlala, ikakhulukazi ukudla amaprotheni amancane - lokhu kungaholela ekwehliseni cholesterol ngaphansi kobuncane obudingekayo kanye nezinkinga ezinkulu kakhulu.